Abavelisi kunye nabaThengisi be-Thermometer ye-infrared - Umzimveliso wase China - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Ukulinganisa ithermometer > I-Thermometer ye-infrared
I-thermometer ye-infrared iqulethe inkqubo ye-optical, i-Photodetector, i-amplifier yomqondiso, ukuqhuba kwesiginali, imveliso yokubonisa kunye namanye amalungu. Inkqubo ye-optical iguqula amandla e-infrared radiation ekujolise kuyo kwicandelo layo lokujonga, kwaye ubungakanani bomhlaba wokujonga bugqitywa ngamalungu ombonakalo wetrmometer kunye nezikhundla zazo. Amandla e-thermometer e-infrared ajolise kwi-Photodetector kwaye aguqulwe abe ngumqondiso wombane ohambelanayo. Isibonakaliso se-infrared thermometer sidlula kwi-amplifier kunye nesekethe yokulungisa umqondiso, kwaye iguqulwe kwixabiso lokushisa kwithagethi yokujonga emva kokuba ilungisiwe ngokwe-algorithm kunye nokwehla kokujolisa kwesixhobo. Ukongeza, iimeko zokusingqongileyo kwithagethi kunye nehermometer, njengobushushu, umoya, ukungcoliseka kunye nokuphazamiseka, njl njl, kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuchaphazela isalathiso sendlela yokusebenza kunye neendlela zokulungisa.
Kwindalo, zonke izinto ezinobushushu bazo obuphezulu kune-zero eqhubekayo zikhupha amandla e-infrared radiation kwindawo ejikelezileyo. Ubungakanani bamandla e-infrared radiation yento kunye nokusasazwa kwayo ngokwe-wavelength zihambelana ngokusondeleyo kubushushu bawo bomphezulu. Ke ngoko, i-thermometer ye-infrared inokulinganisa ngokuchanekileyo ubushushu bayo bomhlaba ngokulinganisa amandla e-infrared radiated yento ngokwayo, esisiseko senjongo apho umlinganiso weqondo lobushushu we-infrared usekwe.
Iimpawu ze-thermometer yokusebenza kwe-infrared: Uluhlu lobushushu, ubungakanani bebala
Umsebenzi we-thermometer we-infrared: chonga ngokuchanekileyo ubushushu bawo obungaphezulu
Ukuhanjiswa kwetrhemomitha yohambo:
I-thermometer yokusebenza kwe-infrared voltage: DC 3V
Imodeli ye-thermometer Bettery Imodeli: AAA x 2
Ubomi be-thermometer engcono yobomi: I-alkaline eyomileyo yebhetri malunga nemilinganiselo engama-20000
Ixesha lokulinganisa ithemometha: Malunga ne-2 yesibini
Uluhlu lokulinganisa lwetrmometer:
Imo yangaphambili ebunzi: 32.0â „ƒ - 42.9â„ ƒï¼ˆ89.6 ° F - 109.2 ° F)
Imo yento: 0.0â „ƒ - 93.0â„ ƒ (32.0 ° F -199.4 ° F)
Ukuchaneka kwethemomitha ngokuchanekileyo (elebhu): ± 0.2â „ƒï¼ˆ ± 0,4 ° F)
Inkumbulo ye-thermometer ye-infrared: Ukufundwa kobushushu be-32
Isilumkiso se-infrared ye-thermometer esezantsi: uphawu lwebhetri esezantsi lubonakalisiwe ukuba i-voltage yombane ingaphantsi kwe-2,5 V ± 0.1V
I-Thermometer ye-infrared amandla acinyiweyo ngokuzenzekelayo: ithemometha iyazivelisa ngokuzenzekelayo ukuba ayisetyenziswanga kwimizuzwana eyi-8 ±
Ubungakanani betrmometer yangaphandle ubukhulu (mm): 150 * 42 * 41 MM
Ubushushu be-thermometer (g): ngaphandle kwebhetriï¼ˆ65Gï¼ ‰
Indawo yokusebenza ye-thermometer yokusebenza:
Ubushushu ï¼š16â „ƒ - 35â â ƒï¼ˆ °ƒï¼ˆ Fƒï¼ˆ °ƒï¼ˆ °ƒï¼ˆ
I-Humidiy: 15% - 95% RH, engavisisaniyo
Uxinzelelo lwe-Atmospheric: 86 - 106 kPa
Ulwazi lokupakisha itrhemomitha yolwazi:
Ubunzima bomnatha: 6.25KG
Ubunzima bomhlaba: 11KG
Ibhokisi enye: 100PCS
Ubungakanani bebhokisi enye yombala: 160 * 66 * 45CM
Ubungakanani beCaton: 65 * 33.5 * 23.5CM
Ubunzima betsimbi yeBare (ngaphandle kwebhetri): 62.5G
I-thermometer ye-infrared yenziwa ngenkqubo ye-optical system, i-photoselectric detector, i-amplifier yomqondiso, ukulungiswa kwesiginali, imveliso yokubonisa kunye nokunye. Inkqubo ye-optical iguqula amandla e-infrared radiation ekujolise kuyo kwicandelo layo lokujonga, kwaye ubungakanani bomhlaba wokujonga bugqitywa ngamalungu ombonakalo wetrmometer kunye nezikhundla zazo. Amandla e-infrared ajolise kwi-Photodetector kwaye aguqulwe abe ngumqondiso wombane ohambelanayo. Isiginali idlula kwi-amplifier kunye nesekethe yokulungisa umqondiso, kwaye iguqulwe kwixabiso lokushisa kweleyitimenti yokujolisa emva kokuba ilungisiwe ngokwe-algorithm kunye nokungahambelani ekujolise kuyo kwesixhobo. Ukongeza, iimeko zokusingqongileyo kwithagethi kunye nehermometer, njengobushushu, umoya, ukungcoliseka kunye nokuphazamiseka, njl njl, kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuchaphazela isalathiso sendlela yokusebenza kunye neendlela zokulungisa.
Iifayile ezishisayo: I-Thermometer ye-infrared, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile eziNinzi, iiFektha, Thenga, China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, uLuhlu lwamaxabiso, Ixabiso lentengo, i-CE, i-FDA